New York Times ayaa soo xigatay afar saraakiil hore oo sheegay in sirdoonka Mareykanka ay dhageysteen wada sheekeysi taleefon oo ay ku lug lahaayeen madaxii hore ee ololaha Trump Paul Manafort iyo xubno kale.
Manafort ayaa beeniyey inay jiraan wada sheekeysiydan, sida ay ku warrantay The Times.
Waxa uu sidoo kale beeniyey warbixin kale oo ay baahisay CNN oo ay ku sheegtay in Manafort iyo la-taliyihii amniga qaranka Trump ee is-casilay Michael Flynn ay xiriir toos ah la sameeyeen dad Ruush ah.
Afhayeenka madaxweynaha Ruushka Dmitry Peskov ayaa sheegay in warbixinadan “aysan wax xaqiiq ah ku fadhin”, halka warbaahinta Ruushka ay sirdoonka dalkaas kasoo xigteen in xiriirkan la sheegay uu yahay mid aan sal lahayn.
Flynn ayaa is-casilay isniintii kadib markii la ogaaday inuu la hadlay safiirka Ruushka Sergey Kislyak, ka hor inta aan la caleemo saarin madaxweyne Trump.